National Power News:: साङ्ला कति खतरनाक ? साङ्लाले निम्त्याउने समस्या र समाधान National Power News:: साङ्ला कति खतरनाक ? साङ्लाले निम्त्याउने समस्या र समाधान
त्यती मात्र होइन, यसले विद्युतिय यन्त्रलाई समेत विगार्छ । विद्युतिय उपकरणलाई समेत यसले आफ्नो घर बनाउँछ । साङला यस्तो जीव हो, जसको प्रजनन क्षमता अत्याधिक हुन्छ । साथै यो सहजै मर्ने वा नष्ट पनि हुँदैन । भान्साको कुनाकाप्चा, दराज, पलङ जताततै साङ्ला फैलन्छ । साङला ट्वाइलेटको ढलबाट समेत घरभित्र प्रवेश गर्छ ।
साङ्लाको पेटको जिवाणु खानामा पर्छ । यसले पाचन क्रियामा समस्या उत्पन्न गर्छ । एक अध्ययन अनुसार, जीवाणु सूडोमोनाज ऐरुगिनोसा साङ्लाको पेटमा हुन्छ । यो यूरिन ट्रेक्ट इन्फेक्सन, पाचन सम्बन्धी समस्या र सेप्सिसको कारण बन्छ । साङ्ला दम रोगीका लागि त सत्रु नै हो । घरमा साङ्ला धेरै बढ्नु भनेको दम रोगीको लागि थप समस्या निम्त्याउनु हो ।